Ndị na-enye ọrụ na |lọ Ọrụ | Ndị na-emepụta ọrụ China
Dongguan Enuo akpụzi Co., Ltd. bụ a enyemaka nke Hong Kong BHD Group, plastic ebu imewe na n'ichepụta bụ ha isi azụmahịa. Ọzọkwa, metal akụkụ CNC machining, prototype ngwaahịa R&D, nnyocha eletrik / nlele R&D, plastic ngwaahịa ịkpụzi, spraying na nzukọ na-emekwa ụfọdụ na.
Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ okike
Enuo ebu nwere ike inye ndị ahịa otu ọrụ nhazi maka nhazi akụkụ ígwè, mmepụta na ọgwụgwọ elu. Companylọ ọrụ ahụ enwetawo ahụmịhe bara ụba na nhazi akụkụ ọla yana ikpe ọgwụgwọ ruo ọtụtụ afọ. Companylọ ọrụ ahụ nwere ngwa nhazi nhazi dị elu nke sitere na ụlọ na nke mba ọzọ (Sodick CNC, EDM), yana Si Rui PC-system CMM ji atụ iji nye ndị ahịankenke CNC akụkụ-egwe ọka ...
Enuo ebuenyewo nlele nlele, CMM nkwado fixtures na mmepụta akara mgbakọ fixtures ruo ọtụtụ afọ nke ebu n'ichepụta na ahịa. Akụkụ nke nyocha jigs na-ekpuchi mkpuchi ụgbọala na n'ime / mpụta akụkụ ịchọ mma.Ọgwụ kpụrụ akụkụ,Auto ọkụ ihu na metal zọ akụkụ. Enuo Team na-adabere na otu ọrụ ọrụ nke ọma, ihe nhazi / ihe nlere dị mma na mma siri ike iji nye ...
Enuo ebu isi azụmahịa bụ plastik ebu imewe na n'ichepụta, anyị osisi ebe 2,000 square mita, nke jupụtara na nkenke CNC machining emmepe, EDM ebua igwe, -egwe ọka igwe, egweri igwe, ule na ndị ọzọ na akụrụngwa kpam kpam ihe karịrị 30 tent, na-atọ ebu nzukọ iche iche so na ya. Onodi kreenu kacha ebuli arọ nke 15 tọn, na-enwe kwa afọ mmepụta 100 tent, na kasị ukwuu Ebu arọ ruo 30 Tọn 'ikike.
Enuo ebuisi azụmahịa bụ plastik ebu imewe na n'ichepụta, anyị osisi ebe 2,000 square mita, nke jupụtara na nkenke CNC machining emmepe, EDM ebua igwe, -egwe ọka igwe, egweri igwe, ule na ndị ọzọ na akụrụngwa kpam kpam ihe karịrị 30 tent, na-atọ ebu nzukọ iche iche so na ya. Onodi kreenu kacha ebuli arọ nke 15 tọn, na-enwe kwa afọ mmepụta 100 tent, na kasị ukwuu Ebu arọ ruo 30 Tọn 'ikike.
Enuo ebu na-eji 3D ebi akwụkwọ ma ọ bụ silicone ebu technology na-enye ndị ahịa na onye-nkwụsị ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka ngwa ngwa ngwaahịa mmepe, ngwa ngwa nlereanya n'ichepụta, ngwa ngwa tooling na uka mmepụta. IjiPRO / E, SOLIDWORKS, MASTERCAM, AUTOCAD na ndị ọzọ software na esịtidem ngwaahịa Optimization nke Ọdịdị, imewe, wdg, na-enye ndị ahịa na a pụrụ ịdabere na ndabere maka ọhụrụ ngwaahịa mmepe, ahịa ule, ngosi ahịa na ebu n'ichepụta.